Halyeey reer France ah oo sheegay waxa uu Mbappé u baahan yahay kahor inta uusan ku biirin Real Madrid – Gool FM
(Paris) 26 Feb 2021. Halyeeyga reer France iyo kooxda Arsenal ee Robert Pires ayaa muujiyay fikirkiisa ku aadan xiddiga ay isku wadanka yihiin iyo naadiga Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappé uu u baahan yahay inuu nasto kahor inta uusan u dhaqaaqin Real Madrid.
Mbappe ayaa lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqi karo kooxda Real Madrid muddo dhowr sano ah, taageerayaasha Los Blancos qudhooda waxay rajeynayaan in heshiiska la dhameystiro, kaasoo wax badan kusoo kordhin doona kooxda.
Wargeyska “Sport” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Halyeeyga reer France iyo kooxda Arsenal ee Robert Pires, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Dadku waa inaysan iloobin in Kylian Mbappé uu da ‘yar yahay, waa 22 jir.”
“Waxa ugu muhiimsan isaga waa inuu ugu yaraan sanad dheeri ah la ciyaaro Paris Saint-Germain kahor inta uusan u dhaqaaqin Real Madrid.”
Intaas kaddib Robert Pires ayaa intaas kaddib ka hadlay shaqada Zinedine Zidane ee kooxda Real Madrid, wuxuuna yiri:
“Aniga ahaan, Zinedine Zidane wuxuu qabanayaa shaqo aad u wanaagsan.”
“Wuu ogyahay cadaadiska uu dareemayo tababare leyliya kooxda Real Madrid, wuuna garanayaa sida wax looga qabto xaallada, waa inuu u tartamaa horyaalka Spain ilaa dhamaadka.”